CATV နှင့်ဂြိုဟ်တု Optic ...
Fiber M သို့ Ports2Ethernet ...
Hangzhou Zongju Optical Equipment Co. , Ltd. သည်တရုတ်နိုင်ငံ၊ Hangzhou တွင်အခြေစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Optical fiber transmission နှင့် telecommunication equipment မ်ားအားသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းခြင်းများကိုအထူးပြုသည်။
CATV + SAT-IF လျှောက်လွှာ
142020 / သြဂုတ်
သြဂုတ်လ ၇ ရက်နေ့တွင်အမျိုးသားရေဒီယိုနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးဌာနသည်တရုတ်ရေဒီယိုနှင့်တရုတ်နိုင်ငံ၏သက်ဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပွဲကိုဘေဂျင်းတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
မင်း N ...
Fiber Optic Media Converter အကြောင်းသင်သိထားသင့်သောအချက်များယနေ့ဆက်သွယ်ရေးတိုးတက်မှုနှင့်အတူကွန်ယက်အော်ပရေတာများအနေဖြင့်ဒေတာအသွားအလာနှင့်တိုးပွားလာသောတိုးတက်မှုနှင့်ကိုက်ညီရမည်။